Kune zvikonzero zvakawanda nei vanhu vanoda kufamba. Mumwe ndivo unogona kunzwa kazhinji ndiyo kukwanisa kuva itsva uye zvinofadza zvakaitika. Chii chinoita vaifamba tsvarakadenga ndechokuti unhu hwakasiyana kuchaita kuvhundutswa nezvinhu zvakasiyana. Adrenaline junkies anotora zororo rinoshanda, kutsvaka kunakidzwa ezvinhu zvishoma ngozi. Foodies vanoshanyira nzvimbo itsva achifarira ndiro yavo inonakidza siyana itsva. Uye nokuti bookworms pakati vafambi, mumaraibhurari uye bhuku muzvitoro unogona kuva nzvimbo yakaisvonaka munyika. Kana uri achipfuura Europe uye kutsvaka zvakanaka bhuku muzvitoro mu Europe kunoshanyira nechitima, tine mazano mashomanana kwamuri:
France ari nyika inofadza, uye Paris ndiro dzayo yakakurumbira rwendo. Kana unyanzvi marudzi kufunga Paris, Notre Dame anouya mupfungwa, pamwe zvitubu yakanaka uye Cherry miti ruva. Zviri chaiwo maonero uchawana kana iwe kushanyira Shakespeare & kambani, pamwe nekunakidzwa ambiance yemabhuku mukati.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye akarurama tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcharming-book-stores-europe%2F%3Flang%3Dsn- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
#bhuku #mabhuku #chitoro chemabhuku #zvitoro zvemabhuku #traveleurope